Jarryd Bartle ၏“ Relax Folks!” ဆောင်းပါးကိုတုံ့ပြန်ခြင်း။ အပြာစာပေသည်ယဉ်ကျေးမှု၏အဆုံးမဟုတ်ပါ "- သင်၏ ဦး နှောက်သည်အပြာဖြစ်သည်
Jarryd Bartle ၏“ Relax Folks!” ဆောင်းပါးကိုတုံ့ပြန်ခြင်း။ အပြာစာပေများသည်ယဉ်ကျေးမှု၏အဆုံးမဟုတ်” ကင်းမျှော်စင်အွန်လိုင်းစာကြည့်တိုက်
Jarryd Bartle ၏“ Relax Folks!” ဆောင်းပါး ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်ယဉ်ကျေးမှု၏အဆုံးမဟုတ်ပါ” ချယ်ရီသည်ကျပန်းလေ့လာမှုအချို့ကိုကောက်ယူပြီးသက်သေအထောက်အထားအမြောက်အများကိုတပြိုင်နက်တည်းလျစ်လျူရှုပြီးအယ်ဒီတာကိုတစ်ထောင့်တစ်စာဖြင့်ဖော်ပြသည်။ Bartle ကို "ကအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါတိုက်စားမှုအစည်းအရုံးသူ့ဟာသူခေါ်တော်မူသော " သြစတြေးလျ၏အရွယ်ရောက်သူများအတွက်သာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်သြဂုတ်လတွင် Jarryd Bartle မှ“ Relax Folks!” ကိုထာဝရဖျက်ပစ်ခဲ့သည်ကို ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားပါ။ သူ့ဘလော့ဂ်ကနေ။ YBOP ၏ဝေဖန်မှုကိုယခုအချိန်အထိရရှိနိုင်သည် အလတ်စားကွန်ရက်စာမျက်နှာ ကြောင်းမူရင်း post ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။
porn သုတေသန၏လက်ရှိပြည်နယ်ရန်လွယ်ကူ access ကိုငါကဒီမှာတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက် Bartle ရဲ့တောင်းဆိုမှုများတွင်မှအမှားကြောင့်လေ့လာမှုအနည်းငယ်စာရင်းပေးထားပြီ
porn / လိင်စွဲ? ဤစာမျက်နှာကိုစာရင်း 52 မှ neuroscience-based လေ့လာမှုများ (MRI, fMRI, EEG, neuropsychological, ဟော်မုန်း) ။ ၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလေ့လာမှုများအစီရင်ခံသည့်အာရုံကြောတွေ့ရှိချက် mirror အဖြစ်အားလုံးသည်စွဲမော်ဒယ်ခိုင်မာသောထောက်ခံမှုပေး။
အဘယ်အရာကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်ကောအသို့နည်း ၏ဤစာရင်းကိုထုတ်စစ်ဆေး 270 ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလေ့လာမှုများကျော်ဒါမှမဟုတ်စာပေဤပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း: ပြန်လည်သုံးသပ် # 1, review2, ပြန်လည်သုံးသပ် # 3, ပြန်လည်သုံးသပ် # 4, ပြန်လည်သုံးသပ် # 5, ပြန်လည်သုံးသပ် # 6, ပြန်လည်သုံးသပ် # 7, ပြန်လည်သုံးသပ် # 8, ပြန်လည်သုံးသပ် # 9, ပြန်လည်သုံးသပ် # 10, ပြန်လည်သုံးသပ် # 11, ပြန်လည်သုံးသပ် # 12, ပြန်လည်သုံးသပ် # 13, ပြန်လည်သုံးသပ် # 14, ပြန်လည်သုံးသပ် # 15.
ငါ Jarryd Bartle ရဲ့တောင်းဆိုမှုများအနည်းငယ်ဖြေရှင်းအောက်တွင်:
BARTLE ဖော်ပြထား: ထိတ်လန့် purveyor porn ကလေးများထိခိုက် porn '' ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလေ့လာသူတို့အားအလားတူအာရုံကြောလုပ်ငန်းစဉ်များ '' ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကိုသတိပေးလိုက်သည်။ Unsurprisingly ဒါပေ သကြားဒါမှမဟုတ် ဘုရားသခင်၌ယုံ or လိင် - တော်တော်လေးသက်ဆိုင်ရာပုံရသည်သော!
Bartle အခြေအနေတွင်ထဲကကောက်နုတ်ချက်ကြာပါသည်။ အားဖြင့်ဆောင်းပါး porn ကလေးများထိခိုက် တကယ်မူးယစ်ဆေးစွဲတွင်တွေ့မြင်အဖြစ် porn စွဲတူညီတဲ့ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုဆိုသည်။ ယနေ့အထိထုတ်ဝေအားလုံးသည်အာရုံကြောလေ့လာမှုများဒီအခိုင်အမာထောက်ခံခဲ့သည်။
ရိုးရှင်းများနှင့်အလွန်ကျယ်ပြန့်ဝေါဟာရများအတွက်အဓိကအခြေခံစွဲ-စေသောဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုနေသောခေါင်းစဉ်: 1) အသိ, 2) Desensitization, 3) အလုပ်မဖြစ် prefrontal ဆားကစ် (hypofrontality), 4) အလုပ်မဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုဆားကစ်။ ထိုအဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများအားလုံး4သည့်ကြားတွင်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများနှင့်လိင်စွဲအပေါ်အာရုံကြောသိပ္ပံ -based လေ့လာမှုများ 50 ကျော်:
အသိ (cue-reactivity & cravings) လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အကျိုးအမြတ်ရှာခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သော ဦး နှောက်ဆားကစ်များသည်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်သောအမှတ်တရများ (သို့) သတိများကိုအလွန်အမင်းအာရုံခံစားမှုဖြစ်စေသည်။ ဤရလဒ်သည် နုတ်မ like နှိပ်သို့မဟုတ်အပျြောအပါးနေချိန်တွင် "လို" သို့မဟုတ်တဏှာတိုးလာ။ ဥပမာအားဖြင့်, ထိုကဲ့သို့သော, ကွန်ပျူတာဖွင့်တဲ့ pop-up ကိုမြင်လျှင်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးတည်းဖြစ်ခြင်းအဖြစ်တွေကို, porn အဘို့မတရားသောလျစ်လျူရှုရန်ခက်ခဲပြင်းထန်သောဖြစ်ပေါ်။ တချို့က ': porn တစ်ဦးတည်းသာလွတ်မြောက်ရှိပါတယ်တဲ့ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဝင်' 'အဖြစ်ထိခိုက်ညစ်ညမ်းတုံ့ပြန်မှုကိုဖော်ပြရန်။ ဒီတစ်ခါလည်းသင်တစ်ဦးအလုအယက်, လျင်မြန်သောနှလုံးခုန်ပင်တုန်လှုပ်, သင်စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်အားလုံးသင်အကြိုက်ဆုံးပြွန် site ကိုပေါ်သို့ logging ဖြစ်ပါတယ်ခံစားရတယ်။ porn အသုံးပြုသူများသည် / လိင်စွဲအတွက်ာင်းသို့မဟုတ် cue-reactivity ကိုသတင်းပို့လေ့လာရေး: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
Desensitization (အကျိုးခံစားခွင့်လျှော့ချနိုင်မှုနှင့်ခံနိုင်မှုလျော့နည်းလာခြင်း) - ၎င်းတွင်လူတစ် ဦး ချင်းစီမှထွက်ခွာသွားသောရေရှည်ဓာတုဗေဒနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများပါဝင်သည် အပျော်အပါးမှလျော့နည်းထိခိုက်မခံတဲ့။ Desensitization သည်မကြာခဏဆိုသလိုသည်းခံမှုအဖြစ်ပြသခြင်းဖြစ်ပြီး၊ တူညီသောတုန့်ပြန်မှုကိုရရှိရန်ပိုမိုမြင့်မားသောဆေးထိုးရန်သို့မဟုတ် ပိုမို၍ လှုံ့ဆော်ရန်လိုအပ်သည်။ အချို့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများသည်အွန်လိုင်းတွင်အချိန်ပိုကုန်ကြသည်။ အနားယူရန်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောဗွီဒီယိုကိုရှာဖွေခြင်း၊ အနားမယူသည့်အခါစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ Desensitization သည်အမျိုးအစားအသစ်များသို့တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာခြင်း၊ တစ်ခါတစ်ရံ ပို၍ ခက်ခဲပြီးလူစိမ်းသို့မဟုတ်နှောင့်ယှက်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိတ်လန့်ခြင်း၊ အံ့အားသင့်ခြင်း (သို့) စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းအားလုံးသည် dopamine ကိုမြင့်တက်စေပြီးလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကိုလျော့နည်းစေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လေ့လာမှုအချို့တွင်လေ့ကျင့်မှုလေ့ကျင့်ခန်းသို့မဟုတ်စွဲလမ်းမှုယန္တရားများပါ ၀ င်သော“ လေ့ကျင့်ခြင်း” ဟူသောဝေါဟာရကိုအသုံးပြုသည်။ ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများ / လိင်စွဲလမ်းသူများအတွက်စိတ်မသက်မသာဖြစ်မှု (သို့) အလေ့အကျင့်ရှိခြင်းကိုသတင်းပို့ခြင်း။ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
အလုပ်မဖြစ် prefrontal ဆားကစ် (အားနည်းသောအားကောင်းသောစွမ်းအား + အချက်များအပေါ်အားဖြည့်ဓာတ်ပြုခြင်း): အလုပ်မဖြစ်သော prefrontal cortex ၏လုပ်ဆောင်ချက်သို့မဟုတ်ဆုလာဘ်စနစ်နှင့် prefrontal cortex တို့အကြားဆက်သွယ်မှုကိုပြောင်းလဲခြင်းသည်ထကြွလွယ်သောထိန်းချုပ်မှုကိုလျှော့ချစေပြီးပိုမိုအသုံးပြုလိုသောပြင်းထန်မှုဖြစ်သည်။ အလုပ်မဖြစ်သော prefrontal ဆားကစ်များကသင့် ဦး နှောက်၏အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုသည်စစ်ပွဲတစ်ခုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ဟူသောခံစားချက်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါအသိစိတ်စွဲလမ်းများ 'ဟုတ်ကဲ့!' ဟုအော်ဟစ်နေကြသည် သင်၏ ဦး နှောက်က 'မဟုတ်ပါ၊ နောက်တဖန်မရှိပါ' ဟုဆိုနေစဉ် သင့် ဦး နှောက်၏အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းများသည်အားနည်းသောအခြေအနေတွင်ရှိနေပြီးစွဲလမ်းများသည်များသောအားဖြင့်အနိုင်ရသည်။ ဆင်းရဲသောအလုပ်အမှုဆောင် (hypofrontality) သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများ / လိင်စွဲလမ်းသူများအတွက် prefrontal လုပ်ဆောင်မှုပြောင်းလဲမှုကိုအစီရင်ခံသည့်လေ့လာမှုများ - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
ချွတ်ယွင်းနေစိတ်ဖိစီးမှုစနစ်က (ပိုမိုစွဲလမ်းခြင်းနှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများ) - စွဲလမ်းမှုသည်ကျွမ်းကျင်သူများကစွဲလမ်းမှုကို ဦး နှောက်၏စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်တွင်ပြောင်းလဲမှုများစွာဖြစ်ပေါ်စေသည့်အပြင်စိတ်ဖိစီးမှုကိုလှုံ့ဆော်သောဟော်မုန်းများ (cortisol နှင့် adrenaline) တို့ကြောင့်စွဲလမ်းမှုကိုစိတ်ဖိစီးမှုရောဂါဟုရှုမြင်ကြသည်။ စိတ်ဖိစီးမှုနည်းသောစိတ်ဖိစီးမှုစနစ်တစ်ခုသည်စိတ်ဖိစီးမှုနည်းသောဖိအားများကိုပင်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့အပြင်ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းက ဦး နှောက်၏စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များကိုသက်ဝင်စေပြီးစိုးရိမ်မှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အလွန်အကျွံတက်ကြွစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု impulse ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ရပ်များ၏အကျိုးဆက်များကိုအပြည့်အဝနားလညျနိုငျအပါအဝင် prefrontal cortex နှင့်အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုတားဆီး။ ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများ / လိင်စွဲသူများအတွက်စိတ်မချရသောစိတ်ဖိစီးမှုစနစ်ကိုညွှန်ပြသည့်လေ့လာမှုများ - 1, 2, 3, 4, 5.
BARTLE ဖော်ပြထား: '' porn စွဲ '' တစ်ဦးဖြစ်ရပ်အဖြစ်တည်ရှိရင်တောင်ဘယ်သူမှ - လက်မှတ်-Level Self-ကြေညာ '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသာယာဝပြောရေးကျွမ်းကျင်သူများက '' ၏သေးငယ်တဲ့အုပ်စုတစ်စုအပြင်ဘက် - တကယ်ကကျယ်ပြန့်ဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်သည်။
ဤသည်မူပိုင်ခွင့်အယူမှားပါပဲ။ ပထမဦးစွာအဆိုပါကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြိုးစားနေပါကြောင်းထီးဝေါဟာရကို "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ" (အောက်တွင်လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲအသိအမှတ်ပြုရန်ပေါ်လာသောporn စွဲအပေါ်အများအပြားအာရုံကြောလေ့လာမှုများဒီအသုံးအနှုန်းအလုပ်ပါပြီ) ။ အဆိုပါ ICD ၏နောက်တစ်နေ့ထုတ်ဝေ 2018 ထွက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ၏ beta ကိုမူကြမ်း အသစ်က ICD-11 "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ" အတွက်တစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုပါဝင်သည် အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် "ဘို့တစွဲလမ်းစေအပြုအမူတွေကြောင့် disorders"။ စကားမစပ်အသစ်ဖန်တီး အမူအကျင့်စွဲအမျိုးအစား ထဲမှာပေါ်လာပါမည် အသစ်က DSM-5, ပါဝင်ဘို့ရာခန့်ထားသော "အင်တာနက်ကိုဂိမ်းရောဂါ" နဲ့။
(5 ပြန်ထုတ်ဝေ) ကို DSM-2013 နောက်ဆုံးမှာသက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခွင် Group ၏အကြံပြုချက်များကိုကျော် "Hypersexuality Disorder 'ပယ်ချခဲ့ပေမယ့်တရားဝင်တစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုအဖြစ်" ညစ်ညမ်းစွဲ "အကဲဖြတ်ဘူး။ ကြားဖြတ်အစိုးရများတွင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလှူလက်ရှိ ICD-10 နှင့်လက်ရှိ DSM-5 (နှစ်ဦးစလုံးအတွက် '' သည်အခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု '' diagnoses "ကို အသုံးပြု. ခံစားနေရသူရှာဖွေရေးမှာhypersexual သို့မဟုတ် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုအမေရိကန်စိတ်ရောဂါ Association ကဒီရောဂါ၏ငြင်းပယ်ခံရရှိနေသော်လည်း ICD-10 နှင့် DSM-5 သုံးပြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်)
လာမည့် ICD-11 အပြင်၌, စွဲလမ်းဆေးပညာ American Society (ASAM) "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစှဲ" တည်ရှိနေကြောင်းဖော်ပြထားပါပြီ! ' အဆိုပါ စွဲလမ်းဆေးပညာ American Society (ASAM) သြဂုတ်လ, 2011 အတွက်ညစ်ညမ်း-စွဲဆွေးနွေးငြင်းခုံအခေါင်းအတွက်နောက်ဆုံးလက်သည်းပါပြီသငျ့သညျအဘယျသို့ထု။ ASAM မှာအမေရိကားရဲ့ထိပ်တန်းစွဲကျွမ်းကျင်သူများကသူတို့ရဲ့ဖြန့်ချိ စွဲလမ်းအသစ်များနှင့်အဓိပ္ပါယ်လောကထဲကလူတော်တော်များများ။ အသစ်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ် အဓိကအချက်များကိုပဲ့ အဆိုပါ YourBrainOnPorn က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ မူးယစ်ဆေးဝါးများလုပ်ပေးအဖြစ်ဗွေဆော်, အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုကိုတူညီသောအခြေခံနည်းလမ်းတွေထဲမှာဦးနှောက်ကိုထိခိုက်စေ။ တစ်နည်းပြောရရင်တော့, စွဲလမ်းအများအပြားမဟုတ်, တဦးတည်းရောဂါ (ခွအေနအေ) ဖြစ်ပါသည်.
လက်တွေ့ကျသောရည်ရွယ်ချက်များအရဤအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုရှိ၊အစစ်အမှန်စှဲ။ "ASAM အတိအလင်းဖော်ပြထား လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစှဲတည်ရှိ နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းတှငျတှေ့တူညီတဲ့အခြေခံဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကြောင့်ဖြစ်ပွားရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ASAM အမေးအဖြေများမှ:
မေးခွန်း: စွဲ၏ဤသစ်ကိုချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်လောင်းကစားဝိုင်းပါဝင်သော addiction ကိုရည်ညွှန်းသည်, အစားအစာ, နှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ။ ASAM တကယ်အစားအစာနှင့်လိင်ဖြစ်လို့ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ပါသလား
အဖြေ: ASAM ၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်စွဲလမ်းမှုသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသောအပြုအမူများနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်ပုံကိုဖော်ပြခြင်းအားဖြင့်စွဲလမ်းမှုကိုပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုမှုနှင့်တူညီခြင်းမှကင်းဝေးစေသည်။ ... ဤအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကစွဲလမ်းမှုသည်လည်ပတ်မှုနှင့် ဦး နှောက်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ပတ်သက်ပြီးစွဲလမ်းမှုရှိသည့်လူများ၏ ဦး နှောက်၏တည်ဆောက်ပုံနှင့်လုပ်ဆောင်ပုံနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။ … Food နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့လောင်းကစားဝိုင်းအပြုအမူတွေစွဲ၏ဤအသစ်သောအဓိပ်ပါယျမှာဖော်ပြထားတဲ့ '' ဆုလာဘ်၏ရောဂါဗေဒလိုက်စား '' နှင့်ဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်။
BARTLE ဖော်ပြထား: ဒါကြောင့်ကျယ်ပြန့် porn စွဲ၏ဒဏ္ဍာရီ "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်မှာလတ်တလော Op-Ed ရိုးရှင်းစွာအမည်ရခဲ့ကွောငျးဖြစ်ပါသည်ညစ်ညမ်း Views: တည်ငြိမ်သောသိမ်းဆည်းထားပါနှင့်တွင်ယူသွား
ဒါဟာအတော်လေး Bartle သာ porn စွဲမတည်ရှိပါဘူးသူ၏အခိုင်အမာထောက်ပံ့ပေးရန်အယ်ဒီတာတစ်ဦး 1-စာမျက်နှာစာတစ်စောင်မှေးနိုင်ကြောင်းပြောပြပါတယ်။ ပို. ပင်ပြောရာမှာက "Op-Ed 'Bartle ဖတ်ပါသို့မဟုတ်သူကိုးကားသောအရာကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ပျက်ကွက်ကြောင်းထုတ်ဖော်, porn သို့မဟုတ်လိင်စွဲလမ်းအကြောင်းကိုဘာမျှမပြောခဲ့။ ဖြစ်ပါသည်
အဲဒီအစားတေလာ Kohut မှားယွင်းစွာသုတေသနဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာအပေါ်ညစ်ညမ်း၏ဆိုးကျိုးများအပေါ် "အတော်လေးရောထွေး" ကြောင်းအခိုင်အမာရန်သူ၏ "Op-Ed 'ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤတွင်အဖြစ်မှန်င်:
ယခုရှိပါတယ် လိင်မှုဆိုင်ရာပြproblemsနာများနှင့်နှိုးဆွမှုနည်းခြင်းနှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောလေ့လာမှု ၄၀ ကျော်ရှိသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုရန်။ တည်ရှိမှု porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးငြင်းခုံအဖြစ်, ကျော် အဆိုပါစာရင်းထဲတွင်ပထမဦးဆုံး7လေ့လာမှုများ causation သရုပ်ပြလူနာအဖြစ် porn အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေ။
ဤရွယ်တူချင်းပြန်လည်သုံးသပ်သောစာတမ်းတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အတိုင်းအမေရိကန်ရေတပ်ဆရာဝန် ၇ ဦး ပါဝင်သည် - အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူတစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2016), အနိမ့်လိင်စိတ်: 2010 ကတည်းကငယ်ရွယ်အထီးလိင်အကဲဖြတ်လေ့လာမှုများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်၏သမိုင်းဝင်အဆင့်အသစ်တစ်ခုဘေး၏တုန်လှုပ်နှုန်းထားများသတင်းပို့ပါ။
အခမဲ့ streaming porn (2006) ၏ထွန်းမတိုင်မီက Cross-Section လေ့လာမှုများနှင့် Meta-analysis သည်တသမတ်တည်း2အောက်မှာလူ 5-40% ၏ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှုန်းကဖော်ပြခဲ့သည်။ 8% ကနေ 14% အထိစဉ်အနိမ့်လိင်စိတ်များအတွက်နှုန်းထားများ (hypo-လိင်) အကွာအဝေး 35 လေ့လာမှုများအတွက် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှုန်း% 16 မှ 37% ကနေအထိ။ ဒါကနီးပါးကနောက်ဆုံး 1000-10 နှစ်များတွင်ငယ်ရွယ်နုပျို ED နှုန်းထားများအတွက်တစ်ဦး 15% တိုးလာပါတယ်။ အဘယ်အရာကို variable ကိုဒီနက္ခတ္တဗေဒမြင့်တက်မှုအတွက်အကောင့်နိုင်ကြောင်းပြီးခဲ့သည့် 15 နှစ်များတွင်ပြောင်းလဲသွားပြီလော
အထက်ပါ 28 လေ့လာမှုများအပြင်, ဒီစာမျက်နှာ 150 ကျွမ်းကျင်သူများကကျော်အားဖြင့်ဆောင်းပါးများနှင့်ဗီဒီယိုများကိုပါရှိသည် အသိအမှတျပွုနှင့်အောင်မြင်စွာ porn-သွေးဆောင် ED နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်အရှုံးကုသကြသူ (urology ပါမောက္ခ, ဆီးရောဂါပါရဂူ, စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်, စိတ်ပညာရှင်, sexologists, MDS) ။ ဆီးရောဂါပါရဂူနှစ်ကြိမ်အမေရိကန်ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအသင်းနှစ်ပတ်လည်ညီလာခံမှာညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်၏သက်သေအထောက်အထားများတင်ပြခဲ့ကြသည်။ (ဒေါက်တာ Pacha ရဲ့တင်ဆက်မှု Watch YouTube ပေါ်မှာ။ )
အဘယ်အရာကိုဆက်ဆံရေးအပေါ်ညစ်ညမ်းရဲ့သက်ရောက်မှုကော? ယခုရှိပါတယ် လိင်မှုကိစ္စနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုကျေနပ်မှုလျော့နည်းစေသောညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက်ထားသည့်လေ့လာမှု ၇၅ ခုကျော်။ သက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများအားလုံးကိုလေ့လာခဲ့သောမကြာသေးမီက meta-analysis မှကောက်နုတ်ချက် (ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်ကျေနပ်မှု: တစ်ဦးတွင် Meta-အားသုံးသပ်ခြင်း, 2017):
သို့သော် ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု Cross-Section စစ်တမ်းများ, longitudinal စစ်တမ်းများနှင့်စမ်းသပ်ချက်အတွက်အနိမ့်လူ့စိတ်ကျေနပ်မှုရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်လျှော့ချလူ့စိတ်ကျေနပ်မှုရလဒ်များအကြားအသင်းအဖွဲ့များလွှတ်ပေးရန်သူတို့ရဲ့တစ်နှစ်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ထုတ်ဝေ status ကိုတို့ကတည်းဖြတ်မခံခဲ့ရပါ။
မိမိအတောင်းဆိုမှုများကိုထောကျပံ့ဖို့တေလာ Kohut ၏အဓိကသက်သေအထောက်အထားကဘာလဲ သူ၏အကအရမ်းကိုယ်ပိုင် 2016 လေ့လာမှု: အဆိုပါလင်မယားဆက်ဆံရေးအပေါ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏ရိပ်မိအကျိုးသက်ရောက်မှု: ပွင့်လင်း-အဆုံးသတ်, ပါဝင်သူ-အကြောင်းကြား, "အောက်-Up ကို" သုတေသနကနဦးတွေ့ရှိချက်.
အဆိုပါလေ့လာမှုကိုကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးနမူနာဆံ့မခံပါဘူး။ အများဆုံးလေ့လာမှုများ porn အသုံးပြုသူများက '' အမျိုးသမီးမိတ်ဖက်တစ်ဦးအလွန်သေးငယ်သောလူနည်းစုမှန်မှန်ကဒီလေ့လာမှုမှာ, porn ကိုအသုံးပြုပြသသွားရမည်အကြောင်း အမျိုးသမီး 95% မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ် porn ကိုအသုံးပြု။ နှင့် အမျိုးသမီး 85% (နှစ်ပေါင်းအချို့ကိစ္စများတွင်) အကြားဆက်ဆံရေး၏အစအဦးကတည်းက porn ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အသုံးပြုမှုသူများသည်နှုန်းထားများကောလိပ်-အသက်ယောက်ျားထက်ပိုမိုမြင့်မားများမှာ! တနည်းအားဖြင့်သုတေသီသူတို့ရှာဖွေနေခဲ့ကြသည်ရလဒ်ထုတ်လုပ်ရန်သူတို့ရဲ့နမူနာ skewed ရှိသည်ဟုပေါ်လာပါသည်။
အဖြစ်မှန်: အကြီးဆုံးအမေရိကန်စစ်တမ်း (အထွေထွေလူမှုစစ်တမ်း) မှ cross-section ဒေတာကြောင်းအစီရင်ခံ အမျိုးသမီးများသာ 2.6% သည်လွန်ခဲ့သောလတွင်တစ်ဦး "ညစ်ညမ်း website မှာ" သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ ပိုမိုကြည့်ရှုရန် 2000, 2002, 2004 ကနေဒေတာတွေကို - ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အိမ်ထောင်ရေး (2014)
ဘာသာရပ် porn နှင့်ပတ်သက်ပြီးပေါ်နှင့်အပေါ် ramble နိုင်ရှိရာမေးခွန်းများကို "နောက်ဆုံးသူ့ကိုဖွင့်လှစ်" အသုံးပြုတဲ့လေ့လာမှု။ ထိုအခါသုတေသီများ ramblings ဖတ်ပါနှင့်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်, အချက်ကိုပြီးနောက်အဘယ်အဖြေကို "အရေးကြီးသော" နှင့်မည်ကဲ့သို့သူတို့ရဲ့စက္ကူအတွက် (လည်?) သူတို့ကိုတင်ပြခဲ့ကြသည်။ ထိုအခါသုတေသီများ porn ရဲ့ဆိုးကျိုးများအကြောင်းကိုပိုမိုထူထောင်, သိပ္ပံနည်းကျနည်းစနစ်များနှင့်တိုက်ရိုက်မေးခွန်းများကိုအလုပ်ပေးသောညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးပေါ်မှာရှိသမျှအခြားလေ့လာမှုများ, ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုဖို့သည်းခြေခဲ့ ချို့ယွင်းချက်။ ဘယ်လိုဒီနည်းလမ်းကိုဖြောင့်မတ်သလဲ?
: အချို့စုံတွဲများကဲ့သို့သော porn ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေသိသိသာသာအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှု, အစီရင်ခံသည်ဤဆိုးဝါးအားနည်းချက်တွေကိုနေသော်လည်း
တေလာ Kohut ရဲ့ site အသစ် နှင့်သူ၏ ရန်ပုံငွေရှာမှာကြိုးပမ်းမှု သူကပဲတစ်ဦးအစီအစဉ်ရှိစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ Kohut porn ၏အသုံးပြုမှုကိုမှပေါ်ပေါက်အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမပြဿနာတွေရှာတွေ့ဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်ဝြေခင်း '' ဖန်တီးမှု '' လေ့လာမှုများတစ်သမိုင်းရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, Kohut ရဲ့ 2016 စက္ကူ, "အမြိုးသမီးမြားမှအမုန်းတရား Making"? ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများ "ဟုကိုယ်စားလှယ်အမေရိကန်နမူနာအတွက် Nonusers သန်းနောက်ထပ်ကျားသာတူညီမျှသဘောထားများကို Hold.
Kohut frame သာတူညီမျှ Feminist ဖော်ထုတ်ခြင်းများအတွက်ထောက်ခံမှုအဖြစ်, အမျိုးသမီး, အမျိုးသမီးများနေ့နေအိမ်အပြင်ဘက်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်, ကိုယ်ဝန်ဖျက်အာဏာရာထူးကိုင်ဆောင်။ ဤတွင်သော့ချက်င်: ပိုပြီးလစ်ဘရယ်ဖြစ်လေ့ရသောလောကလူဦးရေ, ဝေးရှိ ဘာသာရေးလူဦးရေထက် porn အသုံးပြုမှုပိုမိုမြင့်မားမှုနှုန်း။ ဤအစံရွေးချယ်ရာတွင်နှင့်အဆုံးမဲ့သည်အခြား variable တွေကိုလျစ်လျူရှုအသုံးပြုပုံခဲရေးသားသူတေလာ Kohut သူ porn အသုံးပြုသူများအပါဝငျသောအရာကိုသူ့ရဲ့လေ့လာမှုရဲ့ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်တော်မူရွေးချယ်ရေးအပေါ်ပိုမိုမြင့်မားသွင်းယူအတူတက်အဆုံးသတ်မယ်လို့သိတယ် "သာတူညီမျှ။ " ထို့နောသူကအားလုံးကိုပတ်ချာလည်မယ့်ခေါင်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။
အဖြစ်မှန်: အားလုံးနီးပါးလေ့လာမှုများဆန့်ကျင်သောရလဒ်များကိုသတင်းပို့ပါ။ ဤတွင် 40 သဘောထားတွေလိင်အရအခွင့်အရေးမှ porn အသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက်လေ့လာမှုများ, objectification နှင့်လျော့နည်းသာတူညီမျှများမှာ.
BARTLE ဖော်ပြထား: ဒီနှစ်ထုတ်ဝေထားတဲ့သြစတြေးလျစစ်တမ်းများတွင် ယောက်ျားကသာ 4% နှင့်အမျိုးသမီး၏ 1% သူတို့ညစ်ညမ်းစေရန် '' စွဲ '' ခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည်။
လေ့လာမှု၏အနှစ်သာရမှာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကို သုံး၍ ကြီးပြင်းလာခဲ့ကြသောထိုအသက် ၃၀ နှင့်အောက်လူငယ်များတွင်အပျက်သဘောဆောင်သောဆိုးကျိုးများချန်လှပ်ထားခြင်းကြောင့်အတော်လေးလှည့်စားခံခဲ့ရသည်။
လေ့လာမှုမှာစားပွဲတင်5အဆိုအရ, ၁၆-၃၀ အရွယ်ရှိယောက်ျားနှင့်မိန်းမ ၁၇% သည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ဟုဆိုကြသည်။ (မတူဘဲ, လူတွေ 60-69 ကြားတွင်သာ 7.2% အတွေး porn မကောင်းတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ )
ဒေတာကိုအောက်တိုဘာလ 2012 နှင့်နိုဝင်ဘာလ 2013 အကြား၌စုဝေးခဲ့ပါတယ်။ အမှုအရာ, နောက်ဆုံး5နှစ်အတွင်းစမတ်ဖုန်းထိုးဖောက်မှုမှကျေးဇူးတင်စကားအများကြီးပြောင်းလဲပြီ - အထူးသဖြင့်ငယ်ရွယ်သောအသုံးပြုသူများကိုပါ။
အကြောင်းကိုမကြာသေးမီကဘာလဲ အမည်မသိ အင်တာနက်အသုံးပြုသူစစ်တမ်းများ?
စွဲလမ်းမှုနှုန်းလေ့လာမှု parameters များကိုပေါ်မှာမူတည်ပြီးကွဲပြားခြားနား, သင်မူကား, စစ်မှန်တဲ့အခွအေနေကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုလျှင် (အဖွားတို့ပါဝင်သည်ကြောင့်လူဦးရေ-ကျယ်ပြန့်လေ့လာမှုများအပေါ်မှီခိုဖို့ဆန့်ကျင်ကဲ့သို့), ကမှာ-အန္တရာယ်အသုံးပြုသူများကိုအာရုံစိုက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ 2016 ခုနှစ်, သုတေသီများ၏အုပ်စုနှစ်စု (ဥရောပကနေတဦးတည်း, ထိုစတိတ်ကနေတဦးတည်း) အကဲဖြတ်သို့မဟုတ်မေးခွန်းထုတ် အထီး porn အသုံးပြုသူများသည်။ နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများကြောင်းအစီရင်ခံ 28% "ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်စမ်းသပ်မှု (တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဖြစ်စေမိမိတို့၏ဘာသာရပ်များ၏ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏အသုံးပြုမှုများအတွက်ကုသမှုရှာအတွက်စိတ်ဝင်စားအမျိုးသားများ၏လက်တွေ့လက်ခဏာ") သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြ ("အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ: ယောက်ျားတစ်နမူနာအတွက်ပြဿနာနှင့် Non-ပြဿနာအသုံးပြုမှုပုံစံများတစ်ခုကရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးလေ့လာမှု") ။ 2017 မှာတော့ပညာရှင်တွေလည်းညစ်ညမ်းစွဲများအတွက် (အဘယ်သူကိုအချို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကိုမ) အမေရိကန်ကောလိပ်ကျောင်းသားများကအကဲဖြတ်။ ရလဒ်များကြောင်းညွှန်ပြ 19% အထီးကျောင်းသားများနှင့် 4% အမျိုးသမီးကျောင်းသား "(စွဲလမ်းများအတွက်စမ်းသပ်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကောလိပ်ကျောင်းသားများများထဲတွင်ကျဘာစွဲမြား: A ပျံ့နှံ့နေတဲ့လေ့လာ") ။
မှတ်ချက်: စွဲနှုန်းထားများတပြင်လုံးကိုပုံပြင်ပြောပြကြဘူး။ porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နှင့်အတူအချို့သောလုလင်တို့သည်စွဲမပြုဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, မည်သည့်တရားဝင် "စွဲ" တံခါးခုံကိုဖြည့်ဆည်းမဟုတ်ဘူး။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, သူတို့ကတခါတရံတွင်ထိုကဲ့သို့သောအခက်အခဲစိုက်ထူ climaxing နှင့်တည်တံ့ခိုင်မြဲအဖြစ်ပူးပေါင်းလိင်, စဉ်အတွင်းအနိမ့် arousal နှင့်အခြားအလုပ်မဖြစ်မှထမြောက်ဖို့လအတွင်းလိုအပ်ပါတယ်။